७१५ स्थानीय तहको नतिजा आयो, कुन पार्टीले कति स्थानीय तहमा जिते ? « Imagekhabar – Online News Portal of Nepal
७१५ स्थानीय तहको नतिजा आयो, कुन पार्टीले कति स्थानीय तहमा जिते ?
८ जेष्ठ २०७९, आईतवार १७:१८
काठमाडौं । गत बैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको मत गणनाको धेरै जसो स्थानीय तहको मत परिणाम आएको छ ।
गाउँ,नगर,उपमहानगर र महानगर पालिका गरी ७५३ पालिका रहेकामा अहिलेसम्म ७१५ वटा पालिकाको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक मत परिणमामा नेपाली कांग्रेसले सबैभन्दा धेरै पालिकामा बर्चस्व राखेको छ । कांग्रेसले ३१४ वटा स्थानीय तहको प्रमुखपद जितेको छ भने २९२ वटा तहको उपप्रमुख पद जितेको छ । त्यसैगरी कांग्रेसले २ हजार ५६७ जना वडा अध्यक्ष जितेको छ । कांग्रेस पछि नेकपा एमाले दोस्रो स्थानमा रहेको छ । एमालेले १९३ वटा स्थानीय तहमा प्रमुख पद जितेको छ भने २१९ वटामा उपप्रमुख पद जितेको छ । उसले २ हजार ६१ जना वडा अध्यक्ष जितेको छ ।
७१५को नतिजाकुन पार्टीले